यस्तो छ थाइराइडको बिरामीले खान हुने र खान नहुने कुरा
विराटनगर, २४ कात्तिक । थाइराइड हर्मोन मानव शरीरलाई एकदम आवश्यक पर्ने हर्मोनमध्ये एक मानिन्छ । थाइराइड ग्रन्थि घाँटीको तलपट्टी हुन्छ, जसले उक्त हर्मोन उत्पादन गर्ने काम गरिरहेको हुन्छ ।
टाउकोदेखि खुट्टासम्म शरीरका हरेक अंगको विकाश तथा सही ढंगले काम गर्नका लागि थाइराइड हर्मोनले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । थाइराइड हर्मोनले शरीरको खानालाई शक्तिमा परिणत गर्ने प्रक्रिया अर्थात् मेटाबोलिज्मलाई नियन्त्रण गर्ने गर्छ । शरीरमा थाइराइड हर्मोन बढी वा कम उत्पादन हुने गर्दा मानिसहरुलाई थाइराइड रोग लाग्ने हुन्छ ।
शरीरमा थाइराइड हर्मोन बढी हुनुलाई हाइपर थाइराइडिज्म र कम हुनुलाई हाइपो थाइराइडिज्म भन्ने गरिन्छ । पछिल्लो समय थाइराइड रोगले संसारभरिका मानिसहरुलाई सताइरहेको छ । शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतामा कमी आएमा, वंशानुगत कारणले, विभिन्न केमिकल्सको प्रयोग, वातावरणीय प्रदुषण, लामो समयसम्म विभिन्न औषधिहरुको प्रयोग, रुघा लागेमा वा भाइरल इन्फेक्सन भएमा थाइराइड ग्रन्थिमा संक्रमण भएको खण्डमा मानिसहरुमा थाइराइडको समस्या देखा पर्न थाल्छ ।
थाइराइडको बिरामीले के खाने ?
नियमित खानाको अनुपात मिलाएर दैनिक खानामा सलाद, उसिनेको खानेकुरा खाने हो भने थाइराइडको समस्यालाई कम गर्न सकिन्छ । सलादमा प्याज, काक्रो, गाँजर, भिजाइएको गेडागुडी तथा उसिनेको खानेकुरामा आलु, तरुल र सखरखण्डलाई समावेश गर्न सकिन्छ । यसका साथै, अन्न, दाल, दूधजन्य खानेकुरा, माछा, अण्डा, च्याउ, ओखर, बदाम, नट्स, फलफूल, अदुवा, ताजा फलफूलको जुस, ग्रिन टी र प्रशस्त पानी ले शरीरमा मेटाबोलिज्मको मात्रा नियमित गरी थाइराइडबाट जोगाउने गर्छ ।
थाइराइडको बिरामीले के नखाने ?
थाइराइड भएका बिरामीहरुमा मोटोपनको समस्या बढी देखा पर्न सक्ने भएकोले तौल बढाउने तथा क्यालोरी अधिक हुने खानेकुरा जस्तै भात, आलु, मैदा, गुलियो, चिल्लो लगायतका खानेकुराको सेवन कम गर्नु उचित हुन्छ । थाइराइडका समस्या भएका व्यक्तिहरुले आयोडिनयुक्त नुन र सी फुड धेरै खानु हुदैन, यसले शरीरमा अझ हानि गर्छ । त्यस्तै, प्याकेट गरिएका जंकफुड, तेलमा तारेका खानेकुरा, मैदाबाट बनेका, सोयाबिन, बन्दाकोबी, फुलकोबीको तथा रक्सी, चुरोट र सूर्तीजन्य पदार्थको सेवन गर्नु हुँदैन ।